Hoggaaminta - Sorrento Therapeutics
Sarkaalka Caafimaadka ee Sare
Dr. Royal waa maamule dawo oo leh 20 sano oo horumarineed iyo arrimo caafimaad. Dhawaan, wuxuu ahaa Madaxa Caafimaadka ee Suzhou Connect Biopharmaceuticals iyo, ka hor, Analgesics Concentric. Waxa uu dib ugu biiray Sorrento halkaas oo uu hore uga ahaa EVP, Horumarinta Kiliinikada iyo Arrimaha Xeerarka ee 2016
Waxa uu mas'uul ka ahaa ama qalabeeyay dhowr NDA oo guulaystay, oo ay ku jiraan NCE-yada, 505(b)(2)s iyo ANDAs
Dr. Royal waa guddi shahaado ka haysta daawaynta gudaha, daawaynta xanuunka, suuxinta oo leh shahaado dheeraad ah oo ku saabsan maaraynta xanuunka, daawada qabatinka iyo dawooyinka sharciga ah
Waxa uu ahaa Kaaliyaha Bare-sare ee Caafimaadka Jaamacadda Adeegyada Labbiska ee Sayniska Caafimaadka, Kaaliyaha Bare-sare ee Suuxinta/Daawaynta Xannaanada Khatarta ah ee Jaamacadda Pittsburgh Medical Center, iyo Bare Sare ee Jaamacadda Oklahoma iyo Jaamacadda California San Diego
Waxa uu si aad ah u daabacay in ka badan 190 cutub oo buug ah, maqaallo dib loo eegay iyo qoraallo/boodhadhyo; waxaana uu ahaa af-hayeen lagu casuumay shirar heer qaran iyo heer caalami ah
Arrimaha Xeer-dejinta ee Madaxweyne Ku-xigeenka Sare
Dr. Brunswick wuxuu leeyahay in ka badan 35 sano oo jagooyin sare ah Warshadaha Nidaamsanaan leh oo ay ku jiraan in ka badan 9 sano FDA US, Xarunta Cilmi-Bayoolojiga, Qaybta Ka-hortagga Monoclonal
Kahor inta uusan ku biirin Sorrento, Dr. Brunswick waxa uu ahaa Madaxa Arimaha Nidaaminta iyo Tayada ee Sophiris Bio, oo ah shirkad soo saarta daawo loogu talagalay hyperplasia qanjirka 'prostate' iyo kansarka qanjirka 'prostate'. Intaa ka hor waxa uu ahaa madaxa Arimaha Nidaaminta ee Arena Pharmaceuticals oo ku takhasusay daawaynta lagu hagayo G Protein reseptors
Dr. Brunswick wuxuu hogaamiyay kooxda xakamaynta ee Elan Pharmaceuticals oo xoogga saaraysa Cudurka Alzheimers iyo xarunta xanuunka, ziconotide
Madaxweyne ku xigeenka sare ee R&D
Dr. Allen waxa uu ku qaatay in ka badan 15 sano warshadaha bayotechnoolajiyada ee hogaaminaya cilmi baarista, horumarka hore, iyo wax soo saarka hore ee kiliinikada ee ka hortagga fayraska iyo ka hortagga kansarka.
Kahor inta uusan ku biirin Sorrento, Dr. Allen wuxuu u shaqeeyay Agaasimaha Sayniska ee Machadka Cilmi-baarista iyo Horumarinta Turjumaada ee Oregon (OTRADI), isaga oo kaashanaya warshadaha iyo la-hawlgalayaasha tacliimeed ee helitaanka daroogada iyo ololaha musharraxiinta ee lagu beegsanayo kansarka dhiigga, burooyinka adag, iyo cudurada faafa.
Kahor OTRADI, Dr. Allen wuxuu horumariyay barnaamijyo daahfurka ah ee SIGA Technologies kuwaas oo aqoonsaday fayraska si toos ah u dhaqma ee lagu beegsanayo fayraska ku jira qoysaska bunyavirus iyo filovirus iyo sidoo kale haga-hagaajinta ka-hortagga noocyada kala duwan ee fayraska bini'aadamka iyo waajibka bakteeriyada gudaha.
Dr. Xu waxa uu leeyahay in ka badan 20 sano waayo-aragnimo ah fulinta ee warshadaha biotech. Dr. Xu wuxuu ahaa aasaase, madaxweyne iyo maamulaha ACEA Biosciences (oo ay heshay Agilent 2018) iyo ACEA Therapeutics (oo ay heshay Sorrento Therapeutics sanadka 2021). Wuu ku biirayaa Sorrento Therapeutics ka dib markii la helo, oo uu sii wado shaqada sida Madaxweynaha ACEA, oo hoos timaada Sorrento Therapeutics.
Waxa uu maamulayay oo mas'uul ka ahaa ACEA horumarinta dhuumaha daroogada cusub, daraasaadka caafimaadka, iyo xarunta wax soo saarka cGMP.
Waxa uu ahaa la-abuuraha hal-abuure tignoolajiyada qiimaynta unugyada bilaashka ah ee ku salaysan isla markaana masuul ka ah tignoolajiyada/hormarinta badeecada iyo iskaashiga ganacsi ee Roche Diagnosis, ganacsiyaynta caalamiga ah ee tignoolajiyada lahaanshaha ACEA iyo badeecadaha, iyo $250 milyan oo ah iibsiga Agilent ee ACEA Biosciences.
Waxa uu ahaa baare shaqaale iyo saynisyahan cilmi baaris ah oo ka tirsan machadyada Gladstone, Cilmi-baarista Scripps
Machadka iyo Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada ee Maraykanka. Waxa uu leeyahay in ka badan 50 US patents iyo
codsiyada patent-ka oo ay daabacday in ka badan 60 maqaallo cilmi baaris ah oo ku jira joornaalada caalamiga ah, oo ay ku jiraan
Sayniska, PNAS, Biyotechnoolajiyada Dabeecadda, iyo Kiimikada iyo Bayoolaji.
BS, MS, iyo MD
Madaxweyne ku xigeenka Sare ee Hawlaha Ganacsiga
Dr. Sahebi ayaa hogaaminaya hawlaha ganacsi ee Sorrento
Waxay keentaa in ka badan 30 sano oo waayo-aragnimo dawooyin ah oo ay ku jiraan sayniska suuq-geynta iyo istiraatiijiyadda ganacsiga Sorrento
Kahor inta uusan ku biirin Sorrento, wuxuu qabtay jagooyin maareyn sare Novartis, Pfizer, iyo Lilly horumarinta falanqaynta ganacsiga iyo istaraatiijiyadaha suuq-geynta xogta ee mas'uul ka ah kobaca iibka weyn ee in ka badan 20 alaabada oo gaarey heerka xannibaadda ee meelaha Wadnaha, Arthritis, Neuroscience, Sonkorowga, iyo Oncology
Rumayste adag in dhaqamada iskaashigu abuuraan kooxo guulaysta
Madaxweynihii hore, Ururka Sayniska Maareynta Dawooyinka ee Ameerika
BA, MBA iyo Ph.D.
Madaxweyne ku xigeenka fulinta, madaxa dhaqaalaha, madaxa ganacsiga
Ms. Czerepak waxay leedahay in ka badan 35 sano oo maaliyadeed iyo khibrad hawleed oo ku saabsan dawooyinka, tignoolajiyada bayoolajiga iyo raasamaal ganacsi. Waxay dhowaan u adeegtay sidii EVP iyo Madaxa Maaliyadeed ee BeyondSpring Inc., shirkad caalami ah, oo ah shirkad heer caalami ah oo caafimaad. Intaa ka hor, waxay u soo shaqeysay sidii madaxa dhaqaalaha iyo madaxa sarkaalka ganacsiga ee Sayniska Genevant, shirkad gaarsiinta nanoparticles, iyo sarkaal maaliyadeed oo dhowr ah oo kale oo biotechnology ah. Ms. Czerepak waxay leedahay 10 sano oo waayo-aragnimo maalgashi raasamaal ah iyada oo ah Agaasimihii hore ee Maareynta Bear Stearns iyo JPMorgan, waxayna ahayd Aasaasaha Guud ee Iskaashiga Guud ee Bear Stearns Health Innoventures LP Ms. maaliyadda, qorshaynta istaraatiijiyadeed, horumarinta ganacsiga iyo kooxaha bilaabaya ganacsiga. Waxay horseedday raadinta lammaanaha caalamiga ah ee D18E2 (Humira®), kaas oo ku dhammaaday iibintii BASF Pharma ee Abbott $ 7 bilyan. Waxay door muhiim ah ka ciyaartay soo iibsiga Roche ee Syntex $ 6.9 bilyan. Sanadihii la soo dhaafay, waxay sidoo kale gacan ka geysatay kor u qaadida boqollaal milyan oo doolar shirkadaha bayotechnoolajiyada iyada oo hormuud u ah maalgashiga, iyo sidoo kale wax ku biirinteeda CFO iyo xubin Guddiga. Ms. Czerepak waxa ay haysataa BA magna cum laude ee Isbaanishka iyo Xisaabta Waxbarashada Jaamacadda Marshall, MBA oo ay ka qaadatay Jaamacadda Rutgers, iyo Shahaado Agaasimaha Shirkadda ee Harvard Business School.
Madaxweyne ku xigeenka sare, Xidhiidhka Maalgashadayaasha iyo Isgaarsiinta
30+ sano oo waayo-aragnimo ah oo ku saabsan warshadaha biopharmaceutical iyo sayniska nolosha
Mr. Cooley waxa uu jagooyin kala duwan oo iib ah, suuqgeyn, iyo hogaamin ganacsi ka soo qabtay shirkado 500 ah waxana uu horseed ka noqday dhaqaale ururin oo guulo u horseeday shirkadaha tignoolajiyada caafimaadka.
Kahor inta uusan ku biirin Sorrento, Mr. Cooley wuxuu hogaamiyay suuqgeyn caalami ah oo wax soo saar cusub ah oo la soo saaray mas'uuliyadda P&L labadaba Eli Lilly iyo Shirkadda iyo Genentech ee meelaha cudurada ay ka mid yihiin Sonkorowga, Neerfaha, Immunology iyo Cudur naadir ah.
Intaa waxaa dheer, wuxuu sidoo kale horseeday dadaallada is-dhexgalka ee BD, shati-siinta, iyo isku-dhafka labadaba caalami ahaan iyo gudaha Mareykanka Tan waxaa ku jiray heshiisyo ballaarin ganacsi oo badan Yurub, Bariga Dhexe iyo Afrika, iyo heshiis iskaashi oo dhan $400MM si shatiga, horumarinta iyo ganacsiga loo sameeyo. agonist ugu horeysay ee GLP-1
Dhawaanahan, Mr. Cooley waxa uu CBO u ahaa Qaybta Ganacsiga Sofusa ee Kimberly-Clark waxana uu horseed ka ahaa iibka iyo isku darka guusha ee Sorrento Therapeutics. Waxa uu sii wadaa hogaaminta qaybta hababka Bixinta Dawooyinka Lymphatic ee Sorrento.
Madaxweyne ku xigeenka Horumarinta Ganacsiga
30+ sano oo waayo-aragnimo u leh Horumarinta Ganacsiga, Iibinta iyo dadaalka hormuudka ah ee raadinta daroogada, horumarinta iyo iskaashiga
Kahor inta uusan ku biirin Sorrento, Mr. Farley waxa uu jagooyin hogaamineed ka soo qabtay HitGen, WuXi Apptec, VP ee dhismaha xisaabaadka furaha iyo hogaaminta koox caalami ah oo BD ah; ChemDiv, VP of BD at, hogaaminaya dadaallo badan oo lagu abuurayo shirkado daweyn cusub oo ku jira CNS, Oncology iyo Ka-hortagga caabuqyada
Mr. Farley waxa uu lataliye u noqday kooxo kala duwan oo maamulka fulinta ah iyo BODs si ay u horumariyaan ugana ganacsadaan hantida sida Xencor, Caliper Technologies iyo Stratagene
Waxa uu dhisay shabakad adag oo dhan shirkadaha dawooyinka, bayotechnoolajiyada iyo bulshada Venture Capital. Mudane Farley waxa uu ka hadlay shirar badan waxaana lagu daabacay joornaalo kala duwan oo ay asaagii dib u eegeen
Madaxweyne ku xigeenka sare Neurotherapeutics BU
Dr. Nahama waxay hogaamisaa RTX barnaamijyada horumarinta daawada caafimaadka dadka iyo xoolaha
Kooxda hogaaminta xubin ahaan, Dr. Nahama waxay taageertaa horumarinta istaraatiijiyadda, waxay kormeertaa mashaariicda qiimaha sare leh, waxay fududaysaa u diyaarinta suuqa, waxayna kobcisaa dadaallada isbahaysiga dibadda
Si xamaasad leh u kaxeeya fursadaha tarjumaada si loo dardargeliyo barnaamijyada horumarinta aadanaha iyadoo la keenayo tignoolajiyada haddii kale aan heli karin xayawaanka rabaayada ah
Kahor inta uusan ku biirin Sorrento, wuxuu ku qaatay in ka badan 25 sano isagoo haya doorar fulineed caalami ah oo ka shaqeynaya Sayniska Nolosha iyo Bayoloji ee Sanofi, Colgate, Novartis, Merck, VCA Antech iyo VetStem Biopharma
DVM oo leh xirfad hore oo diiradda saarey R&D ee aagga xanuunka (tijaabada caafimaad ee xayawaanka rabaayada ah)